Adeegyada U-doodista Dhibbanaha - Adeegga Caafimaadka Bulshada Inc.
Barnaamijka U-doodista Dhibbanaha ee Adeegga Caafimaadka Bulshada ee Inc. (CHSI) wuxuu siiyaa adeegyo u-doodista dhibbanayaasha labada luqadood haweenka, carruurta iyo ragga ay saameeyeen rabshadaha guriga iyo galmada.
Adeegyada u doodista waxaa ku jiri kara kaalmada hoyga / dib u dejinta, adeegyada taageerada, iyo u diritaanka ururada bulshada. U-doodayaasha Labada-luqadood ee CHSI waxay ka caawiyaan buuxinta Amarada Ilaalinta, u-doodista maxkamadda, iyo isku-dubaridka nidaamyada sharciga.
U doodayaasha Labada Luuqadood
24/7 Farogelinta Qalalaasaha
Qorshayaasha Amniga & Xuquuqda Dhibanaha Dembiyada
Guri Amni / Dib u Dejin
Amarada Ilaalinta, Isku dubaridka maxkamada ee nidaamyada sharciga
Macluumaadka iyo U Diritaanka Daryeelka Caafimaadka & Caafimaadka Habdhaqanka
Haddii adiga ama qof aad taqaanid lagu xadgudbay, fadlan la xiriir khadka dhibaatada ee 24-saac ee CHSI. Dhamaan adeegyadu waa qarsoodi.
Xarunta Caafimaadka Moorhead: 1 (800) 556-9661
Xarunta Caafimaadka ee Crookston: 1 (800) 342-7756
Caawinaad waxaa lagu heli karaa Ingiriis iyo Isbaanish